आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र १८ गते शुक्रबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र १८ गते शुक्रबार
भदौ १८, २०७८ ०५:०१ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल भाद्र १८ गते शुक्रबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ सेप्टेम्बर ३ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्रकृष्णपक्षको द्वादशी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ ।
मेष : मन मिल्ने व्यक्तिसँगको जम्काभेटले रमाइलो माहोल बन्नेछ । नयाँ मित्र बनाइनेछ । काम गरेर आत्मसन्तोष मिल्नेछ । छोटो रमाइलो यात्राको संभावना बलियो रहेको छ । साँझपख स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ ।
वृष : सानातिना समस्याले छाड्ने छैनन् । पूर्व तयारीका साथ कार्य गर्दा समस्यालाई समाधान गर्न सकिनेछ । कुटुम्बको साथ सहयोग मिल्नेछ । सामाजिक कार्यबाट सम्मान पाइनेछ । अचल सम्पत्ति जोडिने छ ।
मिथुन : बोलिको प्रभाव रहनेछ । कामप्रतिको लगनशिलता बढेर जानेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । विशिष्ट समारोहमा अतिथिको सत्कार पाइनेछ । मानसिक क्षमताको प्रशंसा हुनेछ । खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ ।
कर्कट : शत्रू भेदले सताउनेछ । अनावश्यक कार्यमा समय वित्नेछ । थालेका कार्यले सही रुपमा स्थान पाउने छैनन् । नयाँ आर्थिक लगानिले समस्याको सृजना हुनेछ । उत्तराद्र्धको समयमा समस्याहरु हल हुनेछन् ।
सिंह : व्यापार व्यवसायबाट सोचे अनुरुप लाभ मिल्नेछ । अघिदेखिको परिश्रमको फल ग्रहण गर्न पाइनेछ । सहयोगीहरुको साथ समर्थनले गर्दा नयाँ कार्यको आरम्भ हुनेछ । वेलुकी पख एक्कासी समस्या आइलाग्नेछ ।
कन्या : व्यवसायबाट सन्तोषजनक लाभ मिल्नेछ । नयाँ कार्यको प्रस्ताव आउनेछ । पूराना समस्यालाई हल गर्दै नयाँ कार्य योजना रचिने छ । सोच्न सक्ने क्षमताको विकास हुनेछ । उच्चस्तरका व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ ।
तुला : काम प्रतिको लगनशिलता बढेर जानेछ । विपक्षीहरु पनि सहयोगमा जुट्ने छन् । रोकिएका कार्यलाई पहल गर्दा बन्ने छन् । समाज सेवामा मन रमाउनेछ । साकारात्मक सोच विचारको उदय हुनेछ ।
बृश्चिक : मनमा शंका उपशंका उब्जनेछ । सोचे अनुरुप कार्य नबन्दा नैराश्यता छाउनेछ । पारिवारिक समस्याले गर्दा कार्य गर्ने वातावरण बन्ने छैन । उत्तराद्र्धमा सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ । नयाँ अवसर मिल्नेछ ।
धनु : कलात्मक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । नेतृत्व गणसँग घनिष्ठता रहनेछ । श्रृङ्गारिक कार्यमा मन जानेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार हुनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो नै रहनेछ । वेलुकी पख विपक्षीले दु:ख दिनेछन् ।
मकर : नयाँ नयाँ प्रस्तावहरु आउने छन् । व्यापार व्यवसायबाट अनपेक्षित लाभ मिल्नेछ । कामको सन्दर्भमा यात्रा हुनेछ । प्रशासनिक क्षेत्रका अपूरा कार्यलाई पहल गर्दा बन्नेछन् । श्रमको सही मूल्यांकन मिल्नेछ ।
कुम्भ : नयाँ योजना रचिनेछ । नयाँ ज्ञान ग्रहण गर्न पाइनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा नतिजा सकारात्मक आउँदा हर्ष बढ्नेछ । धेरै व्यक्तिसँग सम्पर्क बढ्नेछ । पारिवारिक समस्या हल हुनेछ ।स्वास्थ्यको भने ख्याल राख्नुहोला ।
मीन : आफन्तजनसँगको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । अवसर हुँदाहुँदै पनि विकल्पको बाटो रोज्नाले समस्यामा परिनेछ । सामान्य कार्यलाई पनि धेरै समय खर्च गर्नु पर्नेछ । तर उत्तराद्र्धको समयमा समस्या सुल्झनेछ ।